तत्काल कल! हामीले मिडियालाई अब कार्यबाट टाढा राख्नु पर्छ! : मार्टिन Vrijland
डी टेलिग्राफले सशुल्क लेखहरूको लागि नाम 'अतिरिक्त' बाट 'प्रीमियम' मा परिवर्तन गरेको छ। यदि तपाईं त्यो आत्म-निर्मित समाचार पढ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पहिले त्यो अखबारको सदस्य बन्नु पर्छ जसले '40 /' 45 मा पनि कब्जाकर्ताको पक्षमा लेख्नुभयो। अब हामी जान्दछौं कि एएनपी अरबपति जोन डी मोलको हातमा छ र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यस परिवारले धेरै रमाइलो छवि लिन सक्दछ, किनकि उनीहरूले सबै प्रकारका लोकप्रिय वा हाँस्ने टिभी कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्न सक्दछन् र दर्शकलाई डण्ड आकारको दृश्य तथ्या .्कहरू खुवाउन मनपर्दछ। तोपहरू। जोन डि मोल वास्तवमै आफ्नो एएनपीको साथ 'हल्याण्डको आवाज' बनेका छन् र तपाईको वास्तविकता बारेको धारणामा ठूलो प्रभाव छ।
त्यसकारण अब यो वास्तवमै ठूलो परिवर्तनको लागि समय हो। यो समय राम्रो हो मिडियालाई राम्रो खेलको लागि बाहिर राख्नको लागि। डेभिड आईकेले यसलाई अन्तर्वार्तामा सही राख्छन् जब उनले भन्छन् कि पागलपन नयाँ सामान्य भएको छ। यो समय हाम्रो लागि सत्यको मानदंडलाई उचाल्ने र झूटलाई खेलबाट बाहिर निकाल्ने समय हो। धेरै लामो समय सम्म हामीले स्वीकार्यौं कि मुख्यधारा मिडियाले नक्कली समाचारहरू उत्पादन गर्न र यसको साथ टाढा जान सक्छ। त्यसोभए तिनीहरू नक्कली समाचार वेबसाइटहरूमा गए पनि उनीहरूको आफ्नै वर्षको नक्कली समाचार उत्पादनहरूको ध्यान हटाउन र सबै नक्कली समाचारहरू रूसबाट आएको भनेर भन्न सकिन्छ।
त्यसकारण यस समय तपाईले यस वेबसाइटलाई समर्थन गर्ने र सबै भन्दा माथि होशियारीका साथ मूलधारका मिडियालाई खेलबाट बाहिर राख्नु भएको छ। प्रत्येक पटक जब तपाईं यस्तो अखबार खरीद गर्नुहुन्छ वा पढ्नुहुन्छ, तपाईं यसलाई वैधता दिनुहुन्छ। अब हामी मिडियाको बहिष्कार गरेर स्पष्ट बयान दिनेछौं। बदलामा, सदस्य बन्ने मेरो कामको समर्थन गर्नुहोस् ताकि म हामी खेल्दैछु भनेर चाल र छलको बारेमा लेख्न जारी राख्न सक्छु। हो, पक्कै पनि तपाईं तर्क गर्न सक्नुहुन्छ कि हामीसँग डेभिड इकेजस्तो व्यक्ति छ, त्यसो भए तपाईं किन मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ, डेभिड आईके एक त्यस्तो मानिस हो जो पुरानो मिडिया र राजनीतिबाट आएका हुन्, र दुर्भाग्यवश उनी नियन्त्रणित विपक्षी हुन सक्छन। तपाईं कहिले पनि पुस्तकहरूबाट यति धेरै फ्याट पिलहरू लेख्न सक्नुहुन्न, वृत्तचित्रहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, विश्वभरि आधा बाटोमा उडान गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्येक दिन लेख पोष्ट गर्नुहोस्। त्यो 10 मानिसको काम हो 1 व्यक्तिमा एकीकृत। मान्छेको क्यारिज्म्याटिक करिश्मेको बावजुद पछाडि मद्दत हुनुपर्दछ। म विश्वास गर्दछु कि हालको पावर ब्लकमा 95% सत्य सधै चालित पुरुषहरू मार्फत बाहिर ल्याइएको छ, तर यसै बीचमा उनले डबल फ्लोरमा बम लुकाए। यो सक्रिय हुन्छ जब सत्य आन्दोलन उडाउन आवश्यक छ।
In मेरो अघिल्लो लेख सत्य आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने यस विधिका मैले धेरै उदाहरणहरू देखाएको छु। डेभिड इकेको साथ, मलाई लाग्छ यो सरीसृप कथाको बारेमा छ। इकेले दावी गरेका छन कि एलिस्टिस्ट ब्ल्याडलाइनहरू रिप्टिलियन-जस्तो हुन् जुन आकार परिवर्तन गर्न सक्दछ। उनको कथाको त्यो अंश, मेरो विचारमा, जानाजानी बाँकीसँग मिसिएको छ; जहाँ त्यो बाँकी पूर्ण सत्य देखिन्छ।
यद्यपि म विश्वस्त छु कि हामी एक अनुकरणात्मक वास्तविकतामा बाँचिरहेका छौं र तपाईंसँग सबै प्रकारका घटनाहरू हुन सक्छन् जुन आँखालाई बुझ्न सकिदैन (बाइबलीय स्वर्गदूतहरू र राक्षसहरू लिनुहोस्, कुरानबाट जिनहरू लिनुहोस् वा यूएफओ अवलोकनको बारेमा कथाहरू), कथाहरू सकियो बाहिरी रेसहरू जुन यहाँ पालहरू चलाउँदछन्, मेरो विचारमा, छल। यो भित्र यो भाग लन्डन रियालको अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरिएको साबातियनवादको बारेमा, म जहाँसम्म चिन्तित छु म सही मार्गमा छ, तर मलाई लाग्छ धेरै टाढा जानु भनेको त्यो समूहलाई आकार बदल्ने सरीसृपहरूको वर्गीकरण गर्नु हो। म त्यो समूहलाई अवतार रक्तरेखा कल गर्न रुचाउँछु जुन यो सिमुलेशनको निर्माता द्वारा संचालित; लुसिफर हुनु (हेर्नुहोस्) व्याख्या).
Ik लाई पनि त्यसमा जोड्न सकिन्छ (माथि) लिंक गरिएको लेख दायाँपट्टि ब्रान्ड परिभाषित, ब्रेक्सिटको लागि कट्टर भएर र यसको पछाडि खेलको माध्यमबाट हेर्दै। त्यसोभए उहाँ लगभग सबै बिन्दुहरूमा पूर्ण रूपमा सहि ट्रयाकमा हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यको बावजुद मलाई डर छ कि निकट भविष्यमा हामी कतै कडा ठूलो घोटाला अनुभव गर्नेछौं, जसको अर्थ हो कि उनको प्रतिष्ठा अचानक हराउनेछ। जे होस्, उहाँ एक महान वक्ता हुनुहुन्छ र निश्चित गर्नुहुन्छ कि धेरै व्यक्तिहरू जागृत भए। त्यसकारण म इमान्दारी साथ आशा गर्दछु कि आईके मार्फत सत्य आन्दोलनलाई उडाउने यो प्रभाव देखापर्ने छैन, तर यदि यो हुन्छ भने, तपाइँलाई थाहा छ कि यो शक्तिको परिष्कृत खेलको हिस्सा हो। यो पक्कै ठूलो निराशाजनक हुनेछ (तर पहिलो पटक होइन)।
म फेरि एक सदस्य बन्न एक जरूरी फोन गर्दछ। मेरो कामको भारी विरोध भइरहेको छ, आज स्पष्ट भयो जब वेबसाइट घण्टाको लागि अफ-लाइन थियो। दुबै मिडिया र वैकल्पिक मिडियाको आलोचनात्मक रूपमा अनुसरण गर्न र समाचारको स्वतन्त्र विश्लेषणहरू हेर्न महत्त्वपूर्ण छ। सँधै मनमा राख्नुहोस् कि प्रचलित बल क्षेत्र ठीक मापन गर्न सक्छ र तपाईको विचारलाई कसरी पुर्‍याउँछ यसैले ध्यान दिन महत्वपूर्ण छ। म यसमा योगदान गर्न सक्षम हुन आशा गर्दछु। यसैले म तपाईंलाई एक सदस्य वा एक हुनको लागि सोध्दै छु एक पटक दान गर्न तपाइँको समर्थन जारी गर्न को लागी तुरुन्त आवश्यक छ।
नयाँ EU नियमहरूको कारण, डोनेसन वेबसाइटले अब सहि रूपमा कार्य गर्दैन। तपाईं यसैले मार्फत पनि दान दिन सक्नुहुनेछ: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड फाउन्डेशनको नाममा NL27 ABNA 0558 4469 22
योलान्थे काबाउ र पुलिस श्रृंखला डीएनए, एक सुन्दर जोन डि मोल उत्पादन (एएनपी समाचार जस्तै)
अर्को स्तर सुरक्षा नेट: कैफे वेल्स्चेमरज (पेटिङ्गको ढाँचा) मार्फत पैट्रिक सावेल साजिश कोर्स
ट्याग: ANP, Daivid, de, विशेष, आईके, साक्षात्कार, यूहन्ना, लन्डन, औसत, Mol, नकली समाचार, वास्तविक, पूर्ण रूपमा, पूर्ण
14 सेप्टेम्बर 2019 मा 15: 44
म मेरो अण्डालाई एउटा बास्केटमा राख्दिन, यदि मैले यस प्रकार सुनेँ भने, म अन्वेषकबाट नाम र नामको आधारमा हिंड्ने जानकारीहरू सुन्न सक्छु। उदाहरण क्रिस्टोफर बोलिन, माइकल सी। रपर्ट, बिल कूपर, माइकल कोलिन्स पाइपर आदि द्वारा जाँच गरिएको जानकारी।
म सबैलाई सल्लाह दिन्छु कि उनीहरूको आफ्नै अनुसन्धान गर्न र पास्टरको पछि लाग्नुको सट्टा निष्कर्षमा आउन।
PS: र हेगेलियन सिद्धान्त अनुसार सहि सुत्र पहिलो समस्या निर्माण गर्नु अघि समाधान (गोल) को लागी सोच्नु हो।
19 सेप्टेम्बर 2019 मा 20: 17
इके लाज मान्नुपर्दछ, चेनी र वार खेलको भाग 1on1 हो वेबस्टर टार्प्ली र माइकल सी। रूपर्ट जस्ता अन्वेषकहरूबाट। आईके जस्ता व्यक्तित्वहरूदेखि टाढा राख्नुपर्ने अर्को कारण, विशेष गरी किनभने उनीहरूले स्रोत सामग्री कसरी प्राप्त गरे भनेर उल्लेख गर्दैनन् र सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ताहरूलाई पनि उल्लेख गर्दैनन्। नियंत्रित विपक्ष जुन सहि समयमा डूबिन जान्छ।
14 सेप्टेम्बर 2019 मा 19: 15
चिन्ताजनक छ कि यो लेख यति थोरै साझा गरिएको छ। मा पढ्नुहोस्
जब shit प्रशंसक हिट, हो यो धेरै ढिलो भयो।
De Telegraaf यस साइट भन्दा धेरै आगन्तुकहरु छन्, यस साइट डबल हुनु पर्छ किनभने यसको पछाडि कुनै गम्भीर लाभ र शक्ति छैन।
डि टेलीग्राफ, दोस्रो W O. बाट "राक्षसहरू"।
जसले पनि युद्धलाई "WORLD" युद्धको रूपमा निर्दिष्ट गरेको छ। त्यो पनि जाँच गर्नुहोस्…।
De Telegraaf गलत र गलत थियो, हामी यसलाई अझ सुन्दर बनाउन सक्दैनौं
14 सेप्टेम्बर 2019 मा 19: 43
मैले एक पटक एम्स्टर्डममा नगद दर्ता गर्ने एक व्यक्तिसँग कुरा गरें जसले टेलिग्राफ किन्थे। मैले भनें: "तपाईंलाई थाहा छ यो सबै प्रचार र झूट हो कि तपाईं त्यहाँ किन्नुहुन्छ, हैन?"
उनले जवाफ दिए: "हो, मलाई यो थाहा छ, तर म मेरो बिहानको कफी र मेरो अखबारमा मात्र लत छु।"
र त्यसैले प्रचार मेशिनहरू सधैं एक प्रवेश प्राप्त गर्दछ। यो ट्युब (सम्मोहन) को लागी यति टाढा राम्रो सपना देख्दछ र यसले अखबारमा ती सबै लुगाहरू हटाउँछ। डचवासी उपहास गर्न चाहन्छन्, किनकि त्यो परम्परा हो।
« के 911 आन्तरिक काम थियो? De Telegraaf सँग तपाइँका सबै प्रश्नहरूको जवाफहरू छन्!
पूर्व डिज्नी च्यानल तारा .्कले हलिवुड पेडोफाइलहरूले दुर्व्यवहार गरेको बताउँछन् »
कुल भ्रमण: 13.069.224
'भूत परिवार' साइकोप (मनोवैज्ञानिक अपरेसन): तपाईंको स्वतन्त्रता हरण र 'दिमाग पुलिस' परिचय
guppy op 'भूत परिवार' साइकोप (मनोवैज्ञानिक अपरेसन): तपाईंको स्वतन्त्रता हरण र 'दिमाग पुलिस' परिचय
SalmonInClick op 'भूत परिवार' साइकोप (मनोवैज्ञानिक अपरेसन): तपाईंको स्वतन्त्रता हरण र 'दिमाग पुलिस' परिचय
मार्टिन भिजल्याण्ड op 'भूत परिवार' साइकोप (मनोवैज्ञानिक अपरेसन): तपाईंको स्वतन्त्रता हरण र 'दिमाग पुलिस' परिचय